Sida loo Resize MKV Files
> Resource > Video > Sida loo Resize MKV Files
Haddii aad u badan files MKV weyn on your computer, gaar ahaan files HD MKV, waxay ku qaadan doonaa badan oo boos aad kaydinta. Waayo, kanu, waxaa laga yaabaa in aad dareento xumaaday oo aad rabto inaad resize files MKV cabbirka yar. Si aad u qaban, waxaad u baahan tahay resizer ah MKV awood iyo tayo-sare leh caawimaad. Wondershare Video Editor ( Baahan version Mac ah? Hubi Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac)) ) waa mid ka mid weyn. Waxay ka dhigaysa mid sahlan oo dhakhso ah si loo yareeyo xajmiga faylka iyadoo la sii video tayo aad u sarraysa.
Dhab ahaantii, waxaa jira laba siyaabood oo loogu talagalay ujeeddo. Qaadista xal video, heerka jir iyo heerka xoogaa waa habka ugu wanaagsan ee resize MKV cabbirka yar. Dabcan, haddii aad wax kama qaba badbaadin faylasha aad qaab aad u ciriiri sida FLV iwm, waxa kale oo aad samayn kartaa in this qalab MKV weyn resizing. Oo labadoodiiba la jira doonaa hage ah oo faahfaahsan hoos ka.
1 Import MKV files si album User ee
Marka hore, soo dhoofsadaan aad files MKV deegaanka adigoo riixaya ah "Import" button on dhinaca kore ee bidix ama si toos ah u soo jiiday aad files MKV doonayo kombiyuutar si ay album Users this app ee '. Waxay ku tusi doonaa sida soo socota:
2 Dooro qaab wax soo saarka ah
Jiid mid ka mid ah files MKV uu ka rabo album MKV resizer ee ay waqtiga. Haddii aadan u baahnayn in ay sameeyaan shaqo kasta tafatirka, toos uun ku dhufatey "Abuur" button, guji "qaab" tab ee suuqa kala pop-up ka, ka dibna dooro "MKV" sida qaab wax soo saarka. Ogow in haddii aadan ka fikiraan si uu u badbaadiyo file in qaab kale, waxaad dooran kartaa qaab sare ciriiri sida FLV halkii.
Fiiro gaar ah: Dhab ahaantii, jaray qaybo ka mid ah ka file MKV waa habka ugu tooska ah si loo yareeyo xajmiga file. Sidaas darteed haddii aad leedahay qaar ka mid ah qaybaha aan la rabin in faylka, oo kaliya ay u kala horreeyaan jiidi oo hoos u sareeya oo ka mid ah oo cas Time Tusiyaha inay ku dhejiyey bar bilow iyo dhamaad dhibic aad rabto in aad ka, ka dibna mar kasta oo riix "maqas" button baabbi'iyo clip ah.
3 file Resize MKV
Waxaa jira badhan xagal-qaab hoose ee suuqa kala pop-up wax soo saarka. Just waxaa ku dhuftay in la sameeyo qaar ka mid ah goobaha loo baahan yahay. Qaadista xal video waa habka ugu wanaagsan ee resize files MKV cabbirka yar. Oo weliba, aad hoos u dhigi kartaa heerka ay video jir iyo heerka xoogaa waqti isku mid ah. Ugu dambeyntii, dhoofin file cusub MKV adigoo gujinaya batoonka "Abuur".
Sidoo kale u aragto talaabo talaabo video hoos ku tutorial,
Sida loo Dallaga MKV Files
Dhibta u Common Facebook Video Chat Dhibaatooyinka
AviSplit Alternative: Si fudud Videos Split AVI